China Ukotini Tote Bag Ukwakha futhi Factory | Eqondile
Izikhwama zokuthenga ze-Canvas ziya ngokuya zithandwa kakhulu empilweni yethu ye-dally. Kunezitayela eziningi zezikhwama ze-canvas, ezifana nesitayela sehlathi, isitayela sokubhala, kanye nemfashini yonke umdlalo.
Izikhwama zokuthenga ze-Canvasziya ngokuya zanda kakhulu empilweni yethu ye-dally. Kunezitayela eziningi zezikhwama ze-canvas, ezifana nesitayela sehlathi, isitayela sokubhala, kanye nemfashini yonke umdlalo.
Iningi lezikhwama zendwangu isitayela esingajwayelekile. Imivimbo evundlile isitayela esithandwa kakhulu ngaso sonke isikhathi. Lolu hlobo lwesikhwama sendwangu esithambile futhi esivamile silungele ukugqoka okulula. Isitini esibomvu naso siwumdlalo omuhle, futhi imivimbo efashisayo evundlile isitayela esihle kakhulu sentwasahlobo, isitayela esivamile sokubhala.
Usayizi wesikhwama sendwangu kufanele ube mkhulu, futhi kufanele ukwazi ukuphatha ikhompyutha ephathekayo kanye nephepha lesayizi le-A4. Isitayela sesikhwama sendwangu kufanele sibe lula futhi singabi nzima. Isikhwama se-Canvas tote kufanele kube lula ukusiphatha, sisebenze futhi kulula ukusiphatha, futhi nakho kuyizinto eziyinhloko zokuthenga isikhwama se-canvas. Okuqukethwe kwesikhwama se-canvas kulula, futhi isikhwama se-canvas esinamahlombe nesandla ukuphatha yikho okusebenzayo kakhulu.
Isitayela yizindlela eziyinhloko zokuveza isitayela somkhiqizo, futhi singakwazi nokuveza ukuthenga kwekhasimende
Ugqozi. Isikhwama se-stripe canvas sinezitayela ezilula nezemfashini, imibala ehlanzekile nenhle, futhi ibe yindawo yokuqala ekhanyayo yokuheha amakhasimende. Isitayela esihle siyitshe legumbi lokuthengisa okuphumelelayo. Lapho isitayela sihambisana kakhulu nekhasimende, inqubo yokunaka nokuhlola izindwangu nokusebenza iqala nje.
Izindwangu ze-Canvas zazisetshenziselwa ukwenza amatende ezempi nama-parachute ezinsukwini zokuqala ngenxa yezakhiwo zazo eziqinile futhi eziqinile. Ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, ubuchwepheshe bezindwangu buthuthukiswe kakhulu, futhi izinhlobo zamakhanvasi ziye zanda kancane kancane futhi nohlelo lusebenze kakhulu. Ekhulwini lama-21, singene esikhathini sokuvikelwa kwemvelo, futhi indwangu, indwangu elungele imvelo, ithole ukuqashelwa okuningi futhi yaqhuba imiqondo emisha yemfashini futhi yangena emkhakheni wezemfashini. Izikhwama ze-Canvas seziphenduke into ethandwayo yemfashini.
Kodwa-ke, lapho abantu bethenga izikhwama ze-canvas, abathengi bavame ukungaboni ngaso linye. Abanye abathengi bacabanga ukuthi ukujiya kwendwangu, ngcono ikhwalithi yendwangu, kepha akunjalo. Ikhwalithi yendwangu ayihlangene nokushuba kwendwangu.
Impahla yethu yezikhwama ze-canvas icutshungulwe ngobuchwepheshe obuhlukahlukene, ngakho-ke ayiqinisi nje kuphela futhi ihlala isikhathi eside, kepha futhi inokuzwa okubucayi, okuthambile nokuphefumula. Ukukhanya kwendwangu nakho kwehlisa isisindo sesikhwama sokuqala sendwangu esindayo yangempela.
Usayizi omkhulu, Usayizi Ojwayelekile noma Ngokwezifiso
Langaphambilini Isikhwama se-Canvas Tote
Olandelayo: Non Nokwelukiweyo Cooler Lunch Bag
Anvas Tote Bag Ukotini
ote Bag Ukotini
I-ote Bag Ukotini Wendwangu
ote Bag Ukotini Wemvelo
isikhwama se-otton Canvas Tote
Rganic Ukotini Tote Bag